Norway: Qunsul ay isku dhaceen Barnevernka oo lagu qasbayo inuu dalka isaga baxo - NorSom News
Norway: Qunsul ay isku dhaceen Barnevernka oo lagu qasbayo inuu dalka isaga baxo
Foto: KKN kristen Koalisjon Norge
Dowlada Norway ayaa wasaarada arimaha dibadda Poland ka codsaday inuu dalkeeda isaga baxo Slawomir Kowalski oo ah qunsulka safaarada Poland ee dalkan Norway.
Norway ayaa sidoo kale ku hanjabtay in hadii qunsulkaas uu wadanka ka bixi waayo, ay ku iclaamin doonto «persona non grata» oo ka dhigan inuu qasab wadanka uga baxo, uuna kasii shaqeyn karin.
Ceyrinta qunsulkan ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen, cabasha ka gudbiyeen booliska Norway iyo hey´adda xanaanada caruurta ee Barneverka ah. Qunsulkan ayaa caawin jiray qoysaska u dhashay dalka Poland ee kiisasku kasoo galaan hey´adda xanaanada caruurta ee Norway.
Booliska iyo barnevernka ayaa cabasho ay ka gudbiyeen qunsulkan sheegay inuu ku xadgudbay hab u dhaqanka diblumaasiyiinta, uuna soo dhaafay xuduudiisa. Taas oo ugu danbeyn keentay in Norway ay qunsulkaas ka codsato inuu wadanka isaga baxo.
Sida la sheegay qunsulkan ayaa wasaarada arimaha dibadda ee dalka Poland ay horey ugu aqoonsatay qunsulka sanadka, kadib markii uu gacan u fidiyay ilaa 150 qoys oo kiis uu soo kala dhexgalay hey´adda barnevernka.
Previous articleNew-York: 4 qof oo rabay inay weerar bombaano ku qaadan muslimiinta oo la qabtay
Next articleDad ka badan 11.000 oo sanadkii hore lumiyay taageerada dhaqaale ee Nav